Andininy Bill English momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Bill English
Bill (@billcenglish) no sefon'ny famolavolana at Tuitive ary efa nanao zava-kanto tamin'ny solosaina hatramin'ny andron'ny Amiga 500. Ny Internet sy ny mpizaha tranonkala dia namela azy hanambatra ny tombotsoany maharitra amin'ny famolavolana sary sy ny kanto mirindra miaraka amin'ny fahalianany amin'ny haitao sy ny fandaharana. Ny fialambolin'i Bill dia misy ny tantara an-tsary Marvel, Guitar Hero, ary ny fijerena podcast momba ny sarimihetsika. Ny ankamaroan'ny seho famolavolana azy dia entin'ny Diet Coke be dia be. Mipetraka any Westfield, IN izy izao, miaraka amin'i Nicole vadiny mahatalanjona, ary i Van, zanany lahy mahatalanjona ihany koa.
Zoma, Febroary 19, 2010 Alahady, Jona 28, 2015 Bill English
Ny fahaizana mamaky teny dia ny fahaizan'ny olona mamaky andalan-tsoratra ary mahatakatra sy mahatadidy izay novakiany. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanatsarana ny famakiana, ny fampisehoana ary ny fanehoana ny soratanao amin'ny Internet. 1. Tsy mora ny manoratra ho an'ny tranonkala amin'ny Internet. Ireo masoivohon'ny solosaina dia manana vahaolana ambany amin'ny efijery, ary ny hazavany novinavinaina dia nahatonga ny masontsika ho reraka. Fanampin'izay, tranokala sy rindranasa marobe no ataon'ny olona
Alarobia 20 Janoary 2010 Alakamisy, May 14, 2015 Bill English